डीएसपीले झपार्दा पर्यटन व्यवसायी चुप | eAdarsha.com
रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपाल (रेवान), पोखराको २५ औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित अतिथि ।तस्वीर : आदर्श समाज ।
पोखरा, ५ भदौ । पट्यारलाग्दो कार्यक्रममा सात जना बोलेपछि आठौं नम्बरमा उनको पालो आयो । रेवान पोखराको २५ औं वार्षिक साधारण सभा लेखिएको ब्यानर मुन्तिर उभिएर उनी बोल्न थाले । ‘म लामो बोल्दिनँ, ३ मिनेटभित्रमै आफ्ना भनाइ सक्छुु’ वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख डीएसपी कोमलविक्रम शाहले विहीवार आफ्नो भनाइ यसरी नै शुरु गरे ।
उद्घोषकले ३ मिनेट भने पनि उनले अलि लामै बोले । ‘लेकसाडको कुन होटलमा तोडफोड भएको छ ? कुन रेष्टुरा फोरिएको छ? कि कुनै पर्यटकमाथि हातपात भएको छ?’ दिग्गज पर्यटन व्यवसायीबीच उनले प्रश्नको भेल छुटाउन थाले, ‘कुनै चोरीको खबर सुन्नुभएको छ लेकसाइडमा, कि ग्याङफाइट भएको छ यहाँ ?’ पर्यटन मन्त्री विकास लम्साल पनि माउण्ट कैलास होटलको त्यही हलमा डीएसपी शाहलाई सुन्दै थिए । प्रश्नैप्रश्नका बीच हलको गुनगुन र साइड टक एकाएक शान्त भयो ।
डीएसपी शाह अझै रोकिएनन् । चोरी भनेको त्यही वडा कार्यालय चोरिएको केश हो, त्यही पनि मैले चोरलाई समातेर छाडें । म लेकसाइडमा कुनै ग्याङफाइट र गुण्डागर्दी हुन दिन्नँ । तपाईहरु त्यत्तिकै प्रोपोगाण्ड गर्नुहुन्छ । सुरक्षा भएन भन्नुहुन्छ । पर्यटन व्यवसायीसामु उनले प्रश्न र गुनासो मिसाए–कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर (मिडियामार्फत्) भ्रम फैलाउनुहुन्छ । लेकसाइड अहिले शान्त छ । खाने, पिउने र त्यसपछि धेरैथोरै हल्ला गर्ने त नेपालीको बानी नै हो, यसलाई अन्यथा लिनु भएन ।
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला, पोखरा महानगरपालिका वडा ६ का अध्यक्ष जगतबहादुर पहारी, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल, रेवान पोखराका अध्यक्ष बुधराज भुजेल लगायतले भनाइ राखेका थिए ।